KDQ iyo Danjiraha Somaliland/Somalia u fadhiya mareekanka oo kulan ku yeeshay Hotel Ambassador | Somaliland National Electoral Commission
Home 2017 June 29 News KDQ iyo Danjiraha Somaliland/Somalia u fadhiya mareekanka oo kulan ku yeeshay Hotel Ambassador
Maanta oo Arbaco ah bishuna tahay 28/06/2017 waxa kulan muhiim ah ay iskugu yimaadeen Gudoomiyaha Komishanka Qaranka Somaliland Eng. Abdiqaadir Iiman Warsame iyo Wafti uu hogaaminaayey safiirka Mareekanka ee u fadhiya Somaliland iyo Somalia Danjire Stephen Schwartz.
Kulankan oo qaatay mudo saacad ah waxa Gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Eng. Cabdiqaadir Iimaan Warsame iyo Danjire Stephen Schwartz ka wada hadleen arimaha doorashooyinbka Somaliland.
Kulankan oo ka dhacay Hotel Ambassador Hargeysa maalintii arbacada aheyd waxa ugu horeyn gudoomiyuhu uga wara bixiyay danjire Stephen arimaha doorashooyinka iyo sida habsami u socodka ah ee ay u socoto kaadhqaybintu. Sidoo kale waxa uu uga mahad celiyay taageerada ay ka geestaan dhanka doorashooyinka isaga oo carabka ku dhuftay dhanka daabacaada kaadhadhka iyo taageerada dhanka wacyi galinta ay ka qayb qaateen.
Gabagabadii waxa uu Gudoomiyaha komishanku u ban dhigay Danjire Stephen hawlaha u baahan in ay wax kala qabtaan, arintaas oo uu soo dhaweeyay danjiruhu unna balan qaaday in inta awoodooda ah ay wax kala qaban doonaan codsigooda.